अब घरमै बसेर भर्नुहोस् सेयर,कसरी भर्ने भन्ने जान्न पढ्नुहोस ! « Arthatantra.com
अब घरमै बसेर भर्नुहोस् सेयर,कसरी भर्ने भन्ने जान्न पढ्नुहोस !
काठमाडौ । लगानीकर्ताहरु,अब सेयर भर्न बैंकसम्म पनि जानु नपर्ने भएको छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली(सिडीएससी) अनलाइनबाटै प्राथमिक सेयर भर्ने सुबिधा सुरु गरेको छ । सिडीएससीले मेरो सेयर डट सिडीएससी डट कम डट एनपीमा नयाँ सुबिधा थप गर्दै अनलाइनबाटै सेयर भर्ने सुविधा दिएको हो ।
कसरी भर्ने त ?
प्राथमिक सेयरमा अनलाइन आबेदन दिनु अगाडि लगानीकर्ताले मेरो सेयर अनलाइनमा आफ्नो खाता खोल्नु पर्छ । त्यसका लागी लगानीकर्ताले पहिले आफ्नो हितग्राही (डीम्याट) खाता खोलेको ठाउँमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्छ । निक्षेप सदस्यले अधिकतम ५० रुपैयाँ लिएर लगानीकर्ताको यस्तो खाता खोलिदिन्छन् ।
त्यसपछि, लगानीकर्ताले एक पटक आफ्नो खाता रहेको बैंकबाट ‘सीआस्बा रजिस्ट्रेसन नम्बर(सीआरएन)’ लिनुपर्छ । अहिलेसम्म नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिदार्थ बैंक, प्रभु बैंक, गुडविल फाइनान्स र युनाइटेड फाइनान्सले यस्तो सुविधा दिएका छन् । नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले पनि छिटै यो सेवा सुरु गर्दैछन् ।
यो प्रक्रिया सकिएपछि लगानीकर्ताले प्राथमिक सेयरमा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि मेरो सेयरको वेबसाइटमा गई ‘माई आस्बा’ भन्ने फिचरमा क्लिक गर्नु पर्छ । त्यहाँ प्राथमिक सेयर खुलाउने कम्पनीको नाम लिष्ट हुन्छ । लगानीकर्ताले आफुले चाहेको कम्पनी क्लिक गरि आवेदन दिन सक्नेछन् ।